Krakow အတွက် Next ကိုကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့, အတွက်ပိုလန် 2016: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကလာမည့်ကြောင်းတနင်္ဂနွေကဒီမှာကြေညာခဲ့သည် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ (WYD), ကက်သလစ်လူငယ်ပွဲတော်တွင်, ထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည် ပိုလနျမြို့ Krakow ၌ 2016.
“ချစ်ခင်ရပါသောလူငယ်မိတ်ဆွေတွေ, ကျနော်တို့လာမယ့်ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့အတွက်ရက်ချိန်းများ 2016 တွင် Krakow, ပိုလန်,” သူအပေါ်သုံးသန်းဘုရားဖူးတက်ရောက်တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရဲ့အဆုံးမှာကပြောပါတယ် ရီယိုရဲ့ Copacabana ကမ်းခြေ.
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဖွား Francis ကဘရာဇီးမှတစ်ပါတ်ကြာခရီးစဉ်ကိုတက်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကခဲ့သည်, ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံး ကက်သလစ်တိုင်းပြည်, မတ်လ၌သူ၏ရွေးကောက်ပွဲကတည်းကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အပေါ်.
Krakow ၏ရှေးခယျြမှု၏ဂုဏ်အသရေကိုသော ဂျွန်ပေါလ် II ကို, အဘယ်သူသည် Krakow ကနေချီးကျူ​​းလိုက်ပါတယ်သူကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့စတင် (WYD) မိမိအသြဇာ papacy စဉ်အတွင်းဖြစ်ရပ်များ.
“ကျနော်တို့ငါတို့၏ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို သန့်ရှင်းသောဘုရားအဘခမည်းတော် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်,” Cardinal Stanislaw Dziwisz ကပြောပါတယ်, Krakow ၏ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးမြို့ပြ, ဤနေရာတွင်ဖြန့်ချိမယ့်ကြေညာချက်ထဲမှာ. “ငါတို့သည်သင်တို့၏ကြွလာရန်နှင့်ငါတို့လူငယ်မိတ်ဆွေဤမျှလောက်များစွာသော၏ဆိုက်ရောက်ရန်မျှော်လင့်, အလွန်ကြီးစွာသောမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်။”
WYD ကျင်းပခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအရာရှိတဦး 1986, ဒါကြောင့်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူငယျနှစျယောကျယခင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စုဝေးနေဖြင့်မတိုင်မီခဲ့ပေမယ့် ရောမမြို့.
နောက်တစ်နေ့အာဂျင်တီးနားမြို့တော်အတွင်းနောက်တစ်နှစ်ကျင်းပခဲ့သည် Buenos Aires, သူပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်မီက Francis ကဂိုဏ်းချုပ်ကြီးရှိရာ.
ဤဆောင်ပါး, Krakow အတွက် Next ကိုကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့, အတွက်ပိုလန် 2016: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2013 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကဆှဲဆောငျ3ဘရာဇီးအတွက်သန်း, အကြီးဆုံးပုပ်ရဟန်းမင်းအထုတ်
သဲသောင်ပြင် Mass နှင့်အတူပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပြီးဆုံးဘရာဇီးခရီးစဉ်
3 သန်းလူအုပျ Copacabana ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုနားထောငျဖို့
23864	0 Copacabana, Krakow, ပိုလန်, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် II ကို, ရီယိုဒီဂျနေရို, ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့
← တောခွေး’ ညည်းတွားမြည်တမ်းကွန်ပျူတာအားဖြင့် ID'd နိုငျ အီတလီနည်းပြကျဆင်းရွက်များ 38 သေသော →